Mety ho antony nanapaka ny NXT tato ho ato - Wwe
Antony azo inoana fa nanapahana ny lisitra NXT vao haingana - Tatitra
2021 dia azo antoka fa nahita fanavaozana ny lisitra WWE sy NXT. Nandritra ny SmackDown zoma, anarana maromaro no voalaza fa navotsotra avy amin'ny NXT. Superstar toa an'i Bronson Reed, Bobby Fish, Mercedes Martinez, ary Tyler Rust dia navotsotra tamin'ny fifanarahana NXT rehetra.
PWInsider.com nitatitra fa ny iray amin'ireo antony nahatonga an'ity onjam-pamoahana ity dia ny 'fanarenana' ho avy ny vokatra NXT.
Raha niresaka momba an'i Dave Scherer sy izahay Tsy mila fampisehoana anarana izahay ity herinandro ity , betsaka ny resaka ao anaty momba ny fanovana lehibe ho an'ny marika NXT ao anatin'izany ny fango vaovao, jiro vaovao, fifantohana amin'ny talenta tanora ary endrika hafa amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra. Ity fandraisana an-trano ity anio hariva dia toa anisan'ireo fanovana ireo.
Ny lisitr'ireo kintana rehetra navoaka tamin'ny zoma dia nahitana anarana maromaro, anisan'izany ireo veterana toa an'i Mercedes Martinez sy Fish. Tao koa ireo kintana nosoniavina toa an'i Ari Sterling sy Asher Hale.
Raha fintinina dia navotsotra i WWE
-Ny trondro baby
-Ny harafesina Thyler
- Sean Ross Sapp an'ny Fightful.com (@SeanRossSapp) 7 aogositra 2021
Fish dia nanana lalao tamin'ny talata lasa teo, nianjera tamin'i Roderick Strong an'ny Diamond Mine. Rust dia mpikambana ao amin'ny Diamond Mine ary ny famotsorana azy dia nandao an'i Strong ho mpitolona tokana an'ny ankolafy.
Inona no hitranga amin'ny ho avy ho an'ny NXT?
Ny kintana sasany navoaka tamin'ny NXT dia mahazatra, toy ny Fish, Martinez, Jake Atlas, ary Bronson Reed. Vao tsy ela akory izay dia resin'i Reed ny Tompondakan'i Amerika Avaratra NXT tamin'i Isaiah 'Swerve' Scott. Noheverina fa io fatiantoka io dia ny fananganana fampiroboroboana lisitra lehibe ho an'ny Colossal One.
Ny iray amin'ireo antony nahatonga ny fanapahana notenenin'ny PWInsider.com dia ny nitadiavan'i NXT 'hahazo tanora' talenta. Niresaka momba ny fango sy fampisehoana vaovao koa izy io. Na dia marina izany na i Fish na i Martinez, izay samy manakaiky ny 40 taona, ny kintana toa an'i Reed (32) sy Atlas (26), dia mbola tao amin'ny fotoam-pitsarany.
Miaraka amin'ny onjan'ny fanapahana lisitry ny lisitra manerana ny WWE amin'ity taona ity, dia misy dikany ihany ny famerenarana indray ny NXT. Mbola marika fampandrosoana eo amin'ny WWE izy io nefa matetika dia mitovy na mampiala voly kokoa noho ny RAW na SmackDown.
NXT dia hiarina avy amin'ireo fanapahana lisitry ny lisitra ireo, na dia misy anarana lehibe navoaka aza. Ny fotoana no hilaza raha ny rebrand raha ny marina dia mitranga ato ho ato.
Toetra 10 namana tsara
ny fomba anontaniana lehilahy amin'ny sms
lehilahy macho vs hulk hogan
inona no tadiavin-dry zalahy amin'ny vady
sonia mandeha tsara ny daty
ohatra momba ny zava-misy mahafinaritra momba ny olona